Madaxweynaha Somaliya Oo Xalay Casho Sharaf U Sameeyay Wafdigii Axmed Madobe Ee Ka Socday Maamulka Jubba + Sawirro | Salaan Media
Madaxweynaha Somaliya Oo Xalay Casho Sharaf U Sameeyay Wafdigii Axmed Madobe Ee Ka Socday Maamulka Jubba + Sawirro
Sep 8, 2013 Muqdisho(SM) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaalay casho sharaf u sameeyay wafdiga ka scoda maamulka Jubba oo shalay Muqdisho soo gaadhaay, iyada oo ay goobjoog ka ahaayeen ku simaha Ra’iisul wasraaha iyo xildhibaano ka tirsan dowladda.
Xafladan casho sharafta ah oo madaxweyne Xasan Sheekh xarunta madaxtooyada xalay ugu sameeyay wafdiga uu hogaaminaya gudoomiyaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaan ayaa waxaa goob joog ka ahaa mas’uuliyiin ka tirsan dowlada Federaalka Soomaaliya.
Munaasabad kale oo xog wareeysi ah oo casho sharafta kadib ka dhacday xarunta Madaxtooyada ayaa waxaa ka hadlay mas’uuliyiinta labada dhinac kuwaas oo isku aragti ka ahaa in si wadanjir ah looga shaqeeyo horumarka dalka.
Wasiirka warfaafinta Boostada Isgaarsiinta iyo Gaadiidka mudane C/llaahi Ciilmooge Xirsi oo halkaasi ka hadlay ayaa talaabo wanaagsan ku tilmaamay heshiiska laga gaaray khilaafkii ka jiray maamulka Jubbooyinka, isagoo tibaaxay inuu horseedayo xiriir wanaagsan.
Hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaan ‘’Axmed Madoobe’’ oo hadalo kooban ka jeediyay munaasabadaasi ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in wax la isku qabqabsado iyadoo la ogyahay dalkeena xaalada uu ku jiro oo maleeshiyaadka Shabaab ay qaraxyo ku baabi’inayaan shacabka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay guulaha laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay labada dhinac, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyay in wanaag lagu sii dhameeystiro heshiiska, isagoo tulmaamay in aan loo baahneyn xiligan khilaaf iyo wax kastoo keeni kara dib u dhac.